Google dia mandray ny Raspberry Pi 3 miaraka amin'ny fanohanan'ny Android ofisialy | Androidsis
Raspberry Pi dia solosaina birao tokana lafo vidy fa fitsipika iray novolavolaina tao amin'ny Fanjakana Mitambatra Raspberry Pi Foundation miaraka amin'ny hevitra mandrisika ny fampianarana siansa informatika any an-tsekoly. Ny iray amin'ireo mampiavaka azy indrindra dia ny hoe mety ho lasa mpivarotra na mizara indray ny karatra Rasberry Pi ny olona rehetra, noho izany dia takatra fa vokatra misy fananana voasoratra anarana io, saingy afaka ampiasaina malalaka. Raspberry Pi dia matetika mampiasa rafitra fiasa mifototra amin'ny Linux ary ny fahafahan'izy ireo tsy manolo ny solosainao manokana fa manampy azy.
Izy io aza dia manana kinova Windows 10 loT misy, ka fantatrao izao fa efa akaiky handray i Pi fanampiana ofisialy avy amin'ny iray amin'ireo rafitra fiasa malaza indrindra amin'ny fotoana maha-Android azy. Nisy hazo vaovao natokana manokana ho an'ny Raspberry Pi 3. nipoitra tao amin'ny trano fitehirizam-bokin'ny AOSP (Android Open Source Project). Zava-baovao iray izay hanokatra ny làlana ho an'ny tetikasa vaovao sy ny karazan-java-misy rehetra izay handray andraikitra lehibe kokoa ny Raspberry Pi.
1 Ny hasin'ny loharano misokatra
2 Android amin'ny Pi 3
Ny hasin'ny loharano misokatra
Ny fandefasana tetikasa ho loharano misokatra dia mahatonga ny mpamorona rehetra afaka mampiasa ny asan'ny tany am-boalohany hanatsarana azy na manampy endri-javatra sasany. Amin'ny tetik'asa iray toa an-tananay, toy ny Raspberry Pi 3, dia mety hiteraka safidy an-jatony arakaraka ny fanampiana omena azy, ary araka ny hitanao dia efa manana OS be dia be izy io. na iza na iza hanome azy io.
Raspberry Pis dia mora, avy haben'ny carte de crédit ary manana ARM ao anaty sambo miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fanabeazana sy rindrambaiko misokatra. Manam-pahaizana sy gurus maro no maniry mafy an'i Pi noho ny toetrany misokatra, ny habeny ary ny port sy rindrambaiko maro karazana.
Ho an'izay 35 dolara fotsiny, azonao atao ny manana iray miaraka amin'ny puce Broadcom BCM2837 ARMv8 64-bit miorina amin'ny 1.2 GHz, 1GB RAM, VideoCore IV GPU, Wi-Fi 802.11n ary Bluetooth 4.1. Avy amin'ity fototra ity, araka ny mety hitranga amin'ny motherboard PC mahazatra, afaka manampy andiana singa amin'ny alàlan'ny fitaovana ivelany isika. Azonao atao ny miantehitra amin'ny karatra microSD ho an'ny fitehirizana, jack audio 3,5mm ho an'ny feo na mampiasa port USB amin'ireo singa marobe mifandraika amin'ny hardware.
Android amin'ny Pi 3
Ny hoe hazo na sokajy iray dia hita ao amin'ny tahiry AOSP manokana ho an'ny Raspberry Pi, midika izany fa afaka manana Android miasa tanteraka isika nefa tsy misy ahiahy lehibe. Midika izany, a fitaovana be karatra misy asa manokana amin'ny Android izay fantatsika rehetra.
Ny zavatra mahatsikaiky dia ilay ao amin'ny hazavan'ny fitaovana AOSP Ny fitaovana Nexus matetika dia miseho matetika. Hafahafa ihany ny mahita fitaovana tsy Google ao amin'ny AOSP, noho izany toa misarika ny saina bebe kokoa noho ny noho ity solosaina kely ity i Google. Angamba misy ifandraisany amin'ireo fikasana momba ny Internet of Things sy ireo vokatra izay mety hampiasa ny endrika Raspberry hitondrana Android amin'ny fitaovana rehetra ao an-tsainao.
Miaraka amin'ny fanohanana ofisialy avy amin'ny kaody loharano, dia tokony ho mora kokoa ho an'ny mpamorona ny manana Android amin'ny Raspberry Pi 3. Izany dia mamela anao mametraka fampiharana mihoatra ny 1,5 tapitrisa amin'ny Pi mba hahatonga ilay fitaovana hanao izay tianao. Ka mitombo avo lenta ny fahafaha-manao amin'ny alàlan'ny fahafaha-manana kinova Android TV voajirika amin'ny Pi 3 na koa Remix OS.
Hiandry ny hahita isika izao ahoana ny famenoana ny tahiry miaraka amina tsipika kaody avy amina mpamorona marobe izay hahita Android ho fialan-tsiny manokana hidirana amin'izao tontolo izao izay manokatra Raspberry Pi 3.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Google dia mitondra fanampiana Android ofisialy amin'ny Raspberry Pi 3